Contact Us - McKnight Foundation
710 South 2nd Street, Suite 400
Wax badan oo ku saabsan Xafiisyadayada
Soo dir farriin
Su'aalahaaga iyo walaacaaga ayaa muhiim noo ah. Isticmaal foomka hoose si aad u soo gudbiso faalladaada. Haddii aad rabto inaad gaarto shaqaale gaar ah, fadlan booqo liiska shaqaalaha.
Fadlan xusuusnow inaanan ka jawaabi doonin waxqabad kasta oo ganacsi.
Sidee baan kuu caawin karnaa?*
Su'aalaha GuudWaraysiga WarbaahintaSu'aalaha HRQaadashada DeeqahaWaraysiga CodsadahaAragtida FarshaxankaWeydiinta WaxbarshadaCodsiyada CCRPIsticmaalka Koonfur-bari AsiaCilmi-baarista Isticmaalka Middoobey iyo TamartaCodsiyada aasaasiga ah ee MNCodsiga Wabiga MississippiBaaritaanka Naas-nuujintaSu'aalaha Gobolka iyo Communits
Waxaan si xoog leh kuugu dhiirigelinaynaa inaad marka hore akhrido macluumaadka asalka ah ee deeq bixiyaasha oo dib-u-eegis ku samee shuruudaha faahfaahsan iyo waqtiyada kama dambaysta ah ee noo Bogagga barnaamijka. Haddii aad weli su'aalo qabto, weydii inaad la hadasho sarkaalka barnaamijka (612) 333-4220.
Kama jawaabi doono wixii su'aalo ah ee maaliyadeed ee si cad u muuqda meel ka baxsan meelaha McKnight ee xiisaha barnaamijka. McKnight ma aqbalo soo jeedin aan la oggolayn oo ku saabsan maalgelinta barnaamijka la xidhiidha ama hawlgalka.
Saxafiyiintu waxay email ugu diri karaan maamulaha isgaarsiinta Phoebe Larson at plarson@mcknight.org. Ku dar faahfaahin ku saabsan barta warbaahinta, xagasha sheekada, waqtiga kama dambaynta ah, iyo nooca codsigaaga.